समाज परिवर्तनको संवाहक बन्दै युवा समुह
फागुन १३ सुखड,वीरेन्द्र शाह- कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका –८ बढैपुरमा बस्ने दिपा कँडेल खप्तड रेडियो श्रोता समूहमा आबद्ध भएको ३ वर्ष भयो । अहिले उनी समूहको अध्यक्ष हुन् । पहिला उनलाई दुई चार जनाको सामुन्ने बोल्न धेरे डर लाग्ने गर्थे । मनमा धेरै पिर हुन्थ्यौ । के बोलौँ के भनौँ भनेर । तर अहिले उनलाई त्यस्तो हुँदैन । रेडियो श्रोता समूहमा आबद्ध भए पछि त्यो डर हराएको छ ।कुनै कार्यक्रममा जाँदा अहिले मनका कुरा निर्धक्क भएर राख्ने क्षमतामा बिकास भएको उहाँले बताउनु भयो ।अहिले बोल्न मात्र हैन नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको विकास भएको समूहका सचिव पूर्णमा सापकोटाले बताउनु भयो । हरेक कार्यक्रममा जाँदा मलाई आफ्नो परिचय दिन असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो ।
अगाडि धेरै साथीहरू र ठूलाठूला मान्छेहरू देख्दा नामसमेत भुल्ने गर्थे । कता कता आफूलाई नरमाईलो लाग्ने गर्थौ । केही बोल्न नजान्ने म पछि समूहमा आबद्ध भएपछि परिवर्तन भएको छ । आफ्ना कुराहरू दुई जनाको सामुन्ने राख्न सक्ने भएका छौ । यो परिवर्तन देखेर आफूलाई खुसी पनि लाग्छ ।समूहमा आबद्ध भए पछि नियमित रुपमा रेडियो कार्यक्रमहरू सुन्दै जाँदा हरेक कुरामा चासो निगरानी बढ्दै गएको वडा नम्बर ११ मा रहेको मसुरीया रेडियो श्रोता समूहका अध्यक्ष आशा चौधरीले बताउनु भयो । यसले गर्दा अहिले हरेक कुराको बारेमा जानकारी भएको छ । समुह आबद्ध भए पछि नेतृत्व लिने र वकालत गर्ने कुराको विकास भएको समूहका अर्का सदस्य रुपेन्द्र चौधरीले बताए । आफूमा मात्र परिवर्तन भएर समूहमा आबद्ध सबै साथीहरूमा केही न केही कुराको विकास भएको उनले बताए ।
यी त केही उदाहरणका पात्र मात्र हुन् । पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजनाले गर्दा उनीहरूमा चेतनाको विकासको साथै हरेक कुराहरूमा विकास भएको छ । अहिले उनीहरू हरेक कामहरू आफै नेतृत्व लिएर छलफल,वकालतको साथै रचनात्मक कामहरू गरी रहेका छन् । युवा समूहमा आबद्ध भए पछि उनीहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ । उनीहरूलाई सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सूचना माग गर्नु पर्छ भन्ने कुराको जानकारी थिएन । जब रेडियो श्रोता समूहमा आबद्ध भए पछि नियमित रुपमा साझा बोली कार्यक्रम सुन्न थाले । त्यस पछि सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरूको बारेमा जानकारी हुन थाल्यो । सुशासन कायम गर्न र जबाफदेही बनाउनु उनीहरू लागी परेका छन् । सम्बन्धित निकायहरूलाई सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरूको अभ्यास गर्नको लागी दबाब समेत दिने गरेका छन् ।
रेडियो श्रोता समूहले गरेका काम
बि.स. २०७४ पुस महिना रेडियो श्रोता समुह गठन भएको थियो । गठन भएको पछि ३ वर्ष पुरा भएको छ । युवाहरूले समुदायमा विभिन्न काम गरेका छन् । नम्बर ११ मा रहेको मसुरीया रेडियो श्रोता समूहले वडा सँग समन्वय गरी बाल दिवस, ऐठां टोलमा सरसफाइ, १२ लाख को ड्याक निर्माण उपभोक्ता समितिमा बसेर काम, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नगर पालिकाले कोरोना रोग नियन्त्रणका लागी खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको रकम विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यस नगर पालिकाले कोरोना रोग नियन्त्रण गर्न र खर्च गर्नका लागी गरिएका निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिको सुुचना माग गरेका छन् । त्यसै गरी लौगिंक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान गौरीगंगा नगरपालिका सँग सहकार्य गरी अभियान संचालन, बाल विवाह सम्बन्धी जनचेतना मुुलक सडक नाटक, कोभिड १९ मा गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ लाई अति जोखिम मा रहेका बालबालिकाको परिवार को तथ्याङ्क सङ्कलन मा सहयोग, कोभिड १९ मा गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ लाई क्वारेनटाइनमा स्वयंसेवक भएर काम गर्ने र २,००,००० लाखको खानेपानी उपभोक्ता समिति भएर काम गरेको सदस्य प्रेम चौधरीले बताए ।
यस्तै खप्तड रेडियो श्रोताले पनि गाउँमा विभिन्न कामहरू गरेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा कति किसिमका औषधीहरू पाईन्छन र त्यसको बारेमा गाउँमा जानकारी दिने काम, पशु शाखामा गएर स्थानीयले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी, सूचना पाटी,सुझाव पेटिका थिएन राख्न लगायौँ, विद्यालयहरूमा वक्तृत्व कला, नारी दिवस, विभिन्न दिवसहरूमा भाग लिने, भौतिक निर्माण कामहरूको समय समयमा अनुगमन, उपभोक्ता समितिमा बसेर काम, गौशाला निर्माण गर्नमा सहयोग, विद्यालयमा मास्क वितरण, वडा कार्यालयमा नागरिक वडा पत्रमा राख्नमा दबाब, सामाजिक जबाफदेहिताका औजारहरूको अध्यास गर्नको लागी दबाब दिने र विभिन्न विषयमा सूचना माग गर्ने काम उनीहरूले गरेको खप्तड रेडियो श्रोताका सहजकर्ता जीवन राज कँडेलले जानकारी दिए ।
वडा सँग राम्रो समन्वय : वडा अध्यक्ष
युवा समूह अर्थात् रेडियो श्रोता समूहले वडा सँग गरेर कामहरू गर्ने गरेका छन् । वडा सँग समन्वय र सहकार्य हुँदा हरेक कार्यक्रममा उनीहरूलाई बोलाउने गरेको छ । समुदायमा गठन भएका युवा समुह सँग समन्वय हुने गरेको वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष तुला राम सापकोटाले बताए । युवाहरूले वडामा आएर वडामा भई रहेको गतिविधिहरूमा चासो राख्ने काम गर्ने गरेको उनले बताए । पहिला वडामा नागरिक वडा पत्र थिएन तर युवाहरूले वडामा नागरिक वडा पत्र राख्नु पर्छ भन्ने कुरा गरे पछि अहिले नागरिक वडा पत्र निर्माण गरेको उनको भनाई छ ।
आफूहरूको कामहरू उनीहरूले सचेत गराउने काम गरिरहेको वडा अध्यक्षले बताए । विकास निमार्ण देखी लिएर मानिसलाई चेतनशील बनाउने काम युवाहरूले गरेको वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष विनोद चौधरीले बताए । सुशासन र जबाफदेहिता हुने काम आफूहरूले गरेको उनको भनाई छ । युवाहरू सँग समन्वय गरेर विभिन्न कामहरू गर्ने गरेको वडा अध्यक्ष चौधरीले बताए । युवाहरूले वडा भित्र भएका समस्याहरू वडा कार्यालयमा ल्याउने गरेको र हामीहरूको सहकार्यमा समस्याको समाधानको बाटो खोज्ने काम आफूहरूले गरेको उनले बताए ।